कसरि पुगेका थिए श्री हनुमान जी लंका ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
कसरि पुगेका थिए श्री हनुमान जी लंका ?पौराणिक पात्र, रामायणका एक प्रमुख पात्र अनि महाभारत कालमा पनि उत्तिकै सशक्त उपस्थिति जनाएका हनुमान हिन्दू मान्यताका अष्ट चिरञ्जीवीमध्ये एक हुन् ।
सीताको खोजीमा लंका गएका हनुमानले लंका जलाएको सन्दर्भ धेरै नेपालीको मानसपटलमा ताजा भएर बसेको पाइन्छ ।
हनुमान लंका गएका विषयमा पनि मानिसहरूमा विभिन्न मत पाइन्छ । कसैको भनाइमा हनुमान पौडेर गएका थिए, कसैका भनाइमा उडेर गएका थिए अनि कसैको भनाइमा उनी एउटा टापुबाट अर्को टापुसम्म उफ्रँदै, कुद्दै गएका थिए ।
यी सबै कुराले हनुमानको विषयमा अन्योल सिर्जना गरेको पाइन्छ, त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर यहाँ केही तथ्य पस्कने प्रयास गरिएको छ ।
हनुमान, देवषिर् नारद एवं सनतकुमारहरू नै यस्ता देवता थिए जो आफ्नै शक्तिले आकाशमा उड्थे । जब कि अन्य देवी वा देवताका वाहन हुन्थे ।
हुन त पुराणमा त्यस्ता थुप्रै ऋषिमुनि एवं राजाहरूको वर्णन पाइन्छ जो आफ्नो शक्तिका मद्दतले आकाशमार्गबाट एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म जान्थे । हनुमानको कुरा गर्नुपर्दा उनी सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ हुन् । भनिन्छ, उनी पृथ्वीमा एक कल्पसम्म सशरीर रहन्छन् ।
-हनुमानलाई योगको अष्टसिद्धि प्राप्त थियो । ती आठ सिद्धि हुन्-अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशीता र वशित्व । यी सिद्धिमध्ये लघिमा त्यस्तो शक्ति हो जसका सहायताले सहजै उड्न सकिन्छ ।
लघिमा सिद्धि प्राप्त व्यक्तिले शरीरको तौललाई भाररहित बनाउनसक्छ र ऊ वायुवेगले आकाशमा उड्नसक्छ । हनुमान यही सिद्धिका सहायताले उडेर समुद्रपार लंका पुगेका थिए ।
-योगद्वारा पहिलो तीन महिनासम्म लगातार ध्यान गरेर शरीर एवं आकाशको सम्बन्धमा संयम गरेपछि लघु अर्थात् हलुका कपासजस्तो पदार्थको धारणा गरेर आकाशमा उड्नसक्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ ।
यो शक्ति प्राप्त गर्नका लागि यम र नियम पालन गर्नुपर्छ । यसका साथै संयमित भोजन, वार्तालाप, विचार एवं भावमाथि ध्यान दिनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।
-रामचरित मानसमा एक शब्द लेखिएको छ समुद्र लाँघना अर्थात् समुद्र नाघ्नु । नाघ्नुको. अर्थ पौडिनु, उफ्रँदै दौडनु वा छलाङ मार्नु होइन । नाघ्नुको अर्थ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्दा तलको वस्तुलाई नछोईकन माथिमाथि जानु हो ।
तसर्थ यसको अर्थ उड्नु नै हो । हनुमानले समुद्र नाघेको वर्णन वाल्मीकि रामायण एवं रामचरित मानसको सुन्दर काण्डमा पाइन्छ ।
-परामनेविज्ञानले लघिमा शक्तिका विषयमा खोज गरिआएको पाइन्छ ।
तिब्बत तथा नेपालका केही भिक्षु वा साधु पद्मासनमा बसेर समाधि लगाएकै अवस्थामा आकाशतर्फ केही फिट वा मिटरको उचाइमा उठेको पाइएको छ । आज पनि यस्ता साधु, सन्त र भिक्षुहरू पाउन सकिन्छ ।
यस विषयका केही डकुमेन्ट्री युट्युबमा हेर्न सकिन्छ ।
-हनुमानले थुप्रै ठाउँमा आफ्नो उडान शक्तिको परिचय दिएका छन् जसमध्ये ५ वटा प्रमुख घटना छन् । पहिलोपटक बाल्यकालमा उनी सूर्यलाई फल सम्झेर खाने उद्देश्यले आकाशमा उडेका थिए ।
दोस्रो पटक समुद्र नाघेर लंका पुगे र फर्के । तेस्रो उडान उनले लंका जलाउने क्रममा गरेका थिए । चौथोपटक उनी इन्द्रजीतको वाण लागेर मृत्युमा पुगेका लक्ष्मणलाई बचाउने उद्देश्यले उडेर द्रोण पर्वतसम्म पुगेर उक्त पर्वतलाई नै उचालेर लिइआएका थिए ।
पाँचौँपटक राम र लक्ष्मणलाई अहिरावणको कब्जाबाट फुत्काउन उडेर पाताल लोकसम्म पुगेका थिए ।
-भनिन्छ, पहिले बालिपुत्र युवराज अंगदलाई समुद्र नाघेर लंका जान भनिएको थियो तर उनले आफू जान त सक्षम रहेको तर फर्केर आउन भने सक्ने हो कि नसक्ने हो भनेर संशयमा रहेको बताए ।
त्यतिखेर जाम्वानले हनुमानलाई उनको शक्तिको याद दिलाउँदै उनले मात्र त्यो काम गर्न सक्ने कुरा बताए । अनि हनुमानले आफ्नो शरीर विशाल बनाए अनि महेन्द्र पर्वतमाथि चढेर वायुवेगले समुद्रमाथिबाट लंकातर्फ हुत्तिए ।
-समुद्र पार गर्ने क्रममा देवताहरूबाट हनुमानको बल जाँच्न पठाइएकी नागमाता सुरसासँग भेट भयो । सुरसाले आफू हनुमानलाई खान आएको बताइन् । अनि हनुमानले आफ्नो शरीर सार्‍है ठूलो बनाए ।
सुरसाले झन् ठूलो मुख बनाइन् । यो क्र चल्दै गयो । सुरसाको मुख अति नै ठूलो भएपछि हनुमान तुरुन्तै सानो स्वरूपमा आए र फुत्त सुरसाको मुखभित्र पसेर बाहिर आए । यो देखेर सुरसाले हनुमानको शक्ति र बुद्धि थाहा पाइन्, अनि हनुमानलाई सफलताको कामना गर्दै आशीर्वाद दिएर गइन् ।
हनुमानले सूर्यसँग शिक्षा लिएका थिए । सूर्यले उनलाई नौ प्रकारका विद्याको ज्ञान दिएका थिए । त्यसैगरी यमराजले हनुमानलाई अवध्य एवं निरोगी हुने वर दिए । कुबेरले युद्धमा कहिल्यै विषाद नहुने वरदान दिनुका साथै आफ्नो शस्त्रअस्त्रबाट निर्भय बनाइदिए ।
भगवान् शंकरले पनि आफ्ना कुनै पनि शस्त्रबाट अवध्य हुने वरदान दिए ।
विश्वकर्माले आफूबाट बनाएका कुनै पन शिस्त्रअस्त्रले अवध्य हुने तथा चीरञ्जीवी हुने वरदान दिए ।
देवराज इन्द्रले आफ्नो वज्रबा समेत अवध्य हुने वर दिए । जलदेव वरुणले दस लाख वर्षको आयु हुँदा पनि वरुणपाश तथा पानीबाट अवध्य हुने वर दिए । परमपिता ब्रह्माले दीर्घायु, महात्मा हुनुका साथे सबै प्रकारका ब्रह्मदण्डबाट अवध्य रहने वरदान दिए ।
हवाइजहाज चलाउनका लागि गुरुत्वाकर्षण विरोधी शक्ति आवश्यक पर्छ । लघिमा सिद्धिबाट प्राप्त हुने शक्ति गुरुत्वाकर्षण विरोधी प्रणालीअनुरूपकै हुन्छ । लघिमालाई संस्कृतमा सिद्धि भनिन्छ भने अंग्रजीमा यसलाई लेभिटेसन भनिन्छ ।
लेभिटेसन पावर कुनै तन्त्रविद्या होइन, यो ध्यानको अभ्यासबाट हासिल शक्ति हो । वास्तवमा भन्दा यो ब्रह्माण्डीय शक्ति हो । जसलाई प्राप्त गर्नका लागि यम, नियमको पालना गर्दै तप तथा ध्यान गर्नुपर्छ । हनुमान यस कुरामा पारंगत थिए । यसर्थ हनुमान पौडेर नभई उडेरै लंका पुगेका थिए ।
धर्मकसरि पुगेका थिए श्री हनुमान जी लंका ?